I-Honor 20 kunye ne-20 Pro zisemthethweni: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokunye | I-Androidsis
Sithethile kakhulu malunga nokutsha iiflegi Imbeko, inkxaso-mali yeHuawei, inkampani esele ingene nzulu ngaphakathi Ingxaki enkulu neUnited States. Ezi, akukho nto ingaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi, Imbeko 20 kunye ne-20 Pro, esele zisesikweni ngesitayile.
I-duo entsha yokusebenza okuphezulu iza nezinto ezinomdla kunye nokubalulwa, nangona ikho nezinye ezingasichaphazeliyo konke konke. Nangona kunjalo, umsebenzi wokugqibela osizisela imbeko usithembisa okuninzi, kungoko sinokuthi sijamelene nezixhobo ezibalaseleyo ezibonakalisiweyo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Okulandelayo, sichaza yonke into malunga nabo ...
1 Imbeko 20 kunye ne-20 Pro: amanqaku kunye nokubalulwa
Imbeko 20 kunye ne-20 Pro: amanqaku kunye nokubalulwa
Hlonipha i-Pro 20
I-Honor 20 yinguqulelo esemgangathweni ekwabelana ngayo phantse zonke iimpawu eziHle 20 Pro onazo.. Okwangoku, iyabonakala ukuba yinguqulelo echetyiweyo, enengqiqo. Okwangoku, umahluko wePro, kwinxalenye yawo, yeyona vithamini, ngokusengqiqweni, ke oko kuqhayisa ngakumbi kuphunyezo oluphambili.
Imbeko 20 iza ne Iscreen se-IPS LCD ye-6.26-intshi, ebonelela ngesisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080, i-19.5: umlinganiso we-9 umlinganiso kunye nokuqina komfanekiso we-412 dpi. Ukongeza, isikrini ngokwaso sinomfundi ofunda ngeminwe, ke asizukubanayo emva kweselfowuni, kwaye sinomngxunya kwikona ephezulu yasekhohlo yokufaka ikhamera ye-selfie ye-MP eyi-32 nge f / 2.0 ukuvula. Kwenzeka into efanayo nge-Honor 20 Pro, enephaneli efanayo eneempawu ezifanayo.
Kwiifowuni zombini sabalekela kwinto esele isaziwa Kirin 980 evela eHuawei, Iflegi yenkampani ye-SoC efikelela kwinqanaba lewotshi ephezulu ye-2.6 GHz kwaye idityaniswe neMali-G76 MP10 GPU. Le chipset ihamba kunye nenkumbulo ye-RAM eyi-6 GB, kwimeko ye-Honor 20, kunye ne-8 GB ye-RAM ye-20 Pro, zombini i-LPDDR4x, ngelixa eyokuqala iza nendawo yokugcina yangaphakathi ye-128 GB kwaye eyesibini ine-256 GB . Banikwe amandla yi-3,750 kunye ne-4,000 mAh ibhetri ngokwahlukeneyo, ngenkxaso ye-22.5-watt yokutshaja ngokukhawuleza.
Imbeko 20 (phezulu) kunye neNhlonipho 20 Pro (ezantsi)
Kwimeko yeekhamera, ezi zimbini ziphethe imodyuli ephindwe kabini emqolo, nangona zahlukile. Imodeli esembindini isebenzisa inzwa ephambili Ilungu le-586 MP Sony IMX48 ukuvula i-f / 1.8 kunye ne-OIS, I-angle ebanzi ye-117 ° ye-16 MP, isivamvo esikhulu se-2 MP sokudubula kufutshane ukuya kuthi ga kwi-4 cm kude nesihloko kunye nenye ye-2 MP yemowudi yemifanekiso.
Ngokubhekisele kukwahluka kwePro, sifumana izivamvo ezimbini ezifanayo njengakwi-Honor 20, nangona inzwa ye-Sony IMX586, endaweni yokuba neferture f / 1.8, le mobile iyisa ku-f / 1.4, ukuze ibambe ukukhanya ngakumbi. Izinto ziyatshintsha xa sithetha ngezinye iikhamera ezimbini, njengoko i-2 MP macro sensor ithathelwe indawo yelensi yefowuni ye-8 MP ngobungakanani be-hybrid zoom ukuya kuthi ga kwi-10x, ngelixa ubunzulu be-2 MP buthatyathelwa indawo yi-2 MP macro.
Kwelinye icala, zombini iimfowuni ziyakwazi ukurekhoda Iividiyo ezingama-960fps ezihamba kancinci kwisisombululo se-720p HD, kunye nokufaka ividiyo kwi-4K ukuya kuthi ga kwi-60 fps.
Imbeko 20 (ezimbini zokuqala ukusuka ekhohlo) kunye nembeko 20 Pro (ezimbini zokugqibela ekunene)
Zombini kunye nenye ziza I-Android 9.0 Pie phantsi koMlingo 2.1 UI, I-GPU Turbo 3.0, iaudiyo eyi-9.1 ejikelezileyo, ephucula isandi sezithethi kunye neefowuni, kunye nezibuko le-USB-C, kodwa zahlukile kubukhulu kunye nobunzima, kwaye kwiphepha elilandelayo lobuchwephesha kwiimodeli zombini siyazichaza, ngokunjalo njengayo yonke into eseleyo.
WONKE 20 IPROJEKTHI
ISIKHUMBUZO I-6.26-intshi i-FullHD + i-2.340 x 1.080p (i-412 dpi) ye-IPS LCD ene-91.7% yomyinge I-6.26-intshi i-FullHD + i-2.340 x 1.080p (i-412 dpi) ye-IPS LCD ene-91.7% yomyinge
INKQUBO Kirin 980 Kirin 980
i-RAM I-6 GB LPDDR4x I-8 GB LPDDR4x
ISithuba sangaphakathi esigciniweyo I-128 UFS 2.1 I-256 GB ye-UFS 2.1
IINKCUKACHA Ngasemva: I-586 MP ye-Sony IMX48 (f / 1.8) ene-OIS + 16 MP (f / 2.2) + 2 MP (f / 2.4) I-engile ebanzi yeefoto zemacro + 2 MP (f / 2.4) imowudi yemizobo / Ngaphambili: I-32 MP (f / 2.0) Ngasemva: I-586 MP ye-Sony IMX48 (f / 1.4) ene-OIS + 16 MP ye-Ultra Wide Angle (f / 2.2) + 8 MP Telephoto (f / 2.4) ukuya kuthi ga kwi-10x Hybrid Zoom + 2 MP (f / 2.4) yeefoto macro / Ngaphambili: I-32 MP (f / 2.0)
IBATTERI I-3.750 mAh ene-22.5 W yokutshaja ngokukhawuleza I-4.000 mAh ene-22.5 W yokutshaja ngokukhawuleza
INKQUBO YOKWENZA I-Android 9 Pie phantsi koMlingo 2.1 UI I-Android 9 Pie phantsi koMlingo 2.1 UI
UQHAGAMSHELWANO I-Wi-Fi ac / iBluetooth 5.0 / USB 2.0 / GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS I-Wi-Fi ac / iBluetooth 5.0 / USB 2.0 / GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS
IIMPAWU ZE-OTRAS Iscreen seFingerprint Reader / Ukwamkelwa kobuso / i-USB-C / i-GPU Turbo 3.0 / iAtual Virtual 9.1 ejikeleze Iscreen seFingerprint Reader / Ukwamkelwa kobuso / i-USB-C / i-GPU Turbo 3.0 / iAtual Virtual 9.1 ejikeleze
Ubungakanani kunye nobunzima 154.25 x 73.97 x 7.87 mm kunye ne-174 gram 124.6 x 73.9 x 8.44 mm kunye ne-182 gram
Ixesha elichanekileyo lokuthengwa kwezi fowuni alikaveli. Nangona kunjalo, Siyazi ukuba iya kufika eSpain kwaye Siyathemba ukuba zingathengwa kwiintsuku ezimbalwa. Amaxabiso abo asemthethweni ngolu hlobo lulandelayo:
Imbeko 20 (6GB RAM + 128GB ROM): 499 euro.
Imbeko 20 Pro (8GB RAM + 256GB ROM: 599 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Honor 20 kunye ne-20 Pro sele ziyinyani: siza kukuxelela konke malunga neflegi entsha yohlobo!
Inkqubo yokusebenza yeHuawei iya kuba ilungile ekwindla